ထိုင်ဝမ်အရေးနှင့် တရုတ်နိုင်ငံကို ဟန့်တားရန်ကြိုးပမ်းသူသည် “မီးနှင့်ဆော့ကစားခြင်းဖြစ်ပြီး ကစားသူကိုယ်တိုင်သာ မီးမြိုက်ခံရမည်”ဟု ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပြောကြား - Xinhua News Agency
ပေကျင်း ၊ နိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ထိုင်ဝမ်အရေးနှင့် တရုတ်နိုင်ငံကို ဟန့်တားရန်ကြိုးပမ်းသူသည် “မီးနှင့်ဆော့ကစားခြင်းဖြစ်ပြီး ကစားသူကိုယ်တိုင်သာ မီးမြိုက်ခံရမည်” ဟု
တရုတ်နိုင်ငံပြည်မကြီးမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးက နိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက်တွင် ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်သည်။တရုတ်နိုင်ငံတော်ကောင်စီ ထိုင်ဝမ်ရေးရာရုံးမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ကျူးဖုန့်လျန် (Zhu Fenglian) က တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးအင်အားစုများ၏ လုပ်ရပ်များသည် “အလွန်အန္တရာယ်ကြီးသော” အပြုအမူဖြစ်ကြောင်း သတိပေးပြောကြားခဲ့သည်။
ကျူးဖုန့်လျန်က လစ်သူယေးနီယားသည် အဓိကအားဖြင့် အမေရိကန်နှင့် ထိုင်ဝမ်ရှိ ထိုင်ဝမ်ဒီမိုကရက်တစ်တိုးတက်ရေးပါတီ(DPP) ၏ လှုံ့ဆော်မှုကြောင့် တရုတ်တစ်နိုင်ငံတည်းမူဝါဒကို စိန်ခေါ်ခဲ့ရာ တရုတ်နိုင်ငံအတွက် မဖြစ်မနေ တုန့်ပြန်လုပ်ဆောင်မှု ဆောင်ရွက်ရန် ဖိအားဖြစ်စေခဲ့ပြီး လစ်သူယေးနီးယားနိုင်ငံနှင့် သံတမန်ဆက်ဆံရေးကို သံရုံးယာယီတာဝန်ခံအဆင့်ထိ လျှော့ချသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံ၏ ခိုင်မာသောရပ်တည်ချက်ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း ကျူး က ဆိုသည်။
ထိုင်ဝမ်ဒီမိုကရက်တစ်တိုးတက်ရေးပါတီ(DPP)မှ အာဏာပိုင်များ၏ ဆက်စပ် အပြုအမူများသည် “ဒီမိုကရေစီ” သို့မဟုတ် “ကုန်သွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု” ပြဌာန်ချက်အောက်တွင် “ထိုင်ဝမ်ခွဲထွက်ရေး” နှင့် “ တရုတ်နိုင်ငံမှ ဖဲ့ထွက်ရန် အားထုတ်မှု” ဖြစ်သည့် DPP ၏ စည်းရုံး လှုံ့ဆော်မှုကို နောက်ထပ်တစ်ဖန် လှစ်ဟပြသလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
“ထိုင်ဝမ်ခွဲထွက်ရေး”အတွက် ခွဲထွက်ရေးအင်အားစုများ၏ ကျွန်မတို့ကို ရန်စမှု ၊ ကျွန်မတို့ လက်တွေကို တွန်းအားပေးမှု သို့မဟုတ် မျဉ်းနီကိုတောင်မှ ကျော်ဖြတ်မှုသည် ကျွန်မတို့အတွက် ခိုင်မာသောလုပ်ဆောင်ချက်များ တန်ပြန်လုပ်ဆောင်သွားရန် အတင်းအကြပ်တွန်းအားပေးမှုဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ကျူးက ဆိုသည်။
တရုတ်တစ်နိုင်ငံတည်းမူဝါဒသည် ဒေသတွင်းစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွင် ထိုင်ဝမ်၏ ပါဝင်ခွင့်အတွက် အကြိုကန့်သတ်ချက်အနေအထား ဖြစ်ရမည်ဟူ၍လည်း ၎င်းက ဆိုသည်။
“ ထိုင်ဝမ်ဒေသအနေနဲ့ တရားဝင်သဘောမျိုး မည်သည့်လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှု ဖော်ဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် မည်သည့်လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှုသဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းကိုမဆို ကျွန်မတို့ ပြတ်ပြတ်သားသားကန့်ကွက်ပါတယ်” ဟု ကျူးက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။(Xinhua)
Spokesperson slams containing China with Taiwan question
BEIJING, Nov. 24 (Xinhua) — A Chinese mainland spokesperson on Wednesday said those who attempt to contain China with the Taiwan question are “playing fire” and “will only get themselves burned.”
Zhu Fenglian, the spokesperson for the Taiwan Affairs Office of the State Council, warned that such moves by anti-China forces are “extremely dangerous.”
Zhu said so atapress briefing when asked to comment the viewpoint of some Taiwan scholars that Lithuania had been incited mainly by the United States and the Democratic Progressive Party (DPP) authorities in Taiwan to challenge the one-China principle, which forced China to downgrade its diplomatic relations with Lithuania to the level of charge d’affaires.
Chinese foreign ministry had made the country’s solemn position on the issue clear, Zhu said.
The relevant acts of the DPP authorities, under the pretext of “democracy” or trade cooperation, have once again exposed the DPP’s nature of advocating “Taiwan independence” and seeking to split China, she added.
“Should the separatist forces for ‘Taiwan independence’ provoke us, force our hands or even cross the red line, we will be compelled to take resolute measures,” Zhu said.
She also said the one-China principle must be the precondition for Taiwan’s participation in regional economic cooperation.
“We resolutely oppose the Taiwan region to join any free trade initiative or sign any free trade agreement of official nature,” Zhu said. Enditem